Kusawirirana Pakati peMDC neZanu PF muCOPAC Kunombomisa Hurongwa Hwebumbiro reMitemo
Hurongwa hwekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika hwambomiswa zvichitevera kusawirirana kukuru pakati pemapato eMDC ari maviri nebato reZanu PF pamusoro pemashandisirwo angaitwe zvakabva muvanhu.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti Zanu PF yave kuramba zvakanga zvambowiriranwa nemapato aya pamasharirwo achaitwa pfungwa dzevanhu, ichida kuti pfungwa yoga-yoga yakataurwa nemunhu izvi mirire, zvisinei nekuti ine hudzamu here kana kuti kwete.
Mapato maviri eMDC anzi ari kuda kuti pangotariswa chete hudzamu hwezvakabva kumunhu, kwete kuti patariswe kuti pfungwa iyi yakataurwa kakawanda zvakadii.
Nzira iri kudiwa neZanu PF yanzi inoita kuti bato iri riwane zvido zvaro, sezvo vanhu vakawanda vekumaruwa vainzi vaimanikidzwa kutaura pfungwa dzeZanu PF.
Chimwezve chinhu ndechekuti kumaruwa kwakaitwa misangano yakawanda kupfuura kumadhorobha panguva yaitorwa pfungwa dzevanhu.
Zvikwata zvemathematic committee zvanga zvasvika panguva yekuongorora nekunan’anidza zvakabva muvanhu gore rapera.
COPAC yaitarisira kuti inenge yapedza hurongwa hwekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo panopera mwedzi waGunyana gore rino.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC vachimirira MDC T, VaDouglas Mwonzora vaudza Stuido 7 kuti Havana kufara nekushanduka kwava kuitwa neZanu PF.
Asi vari kumirira Zanu PF muCOPAC VaMunyaradzi Paul Mangwana, vati Zanu PF haisi iyo iri kunetsa asi kuti mapato maviri eMDC ndiwo ari kufurirwa nenyika dzekumawirira kuti abude muhurongwa uhu, sezvo zvido zvenyika idzi zvekuti zvido zvengochani zviiswe mubumbiro idzva remitemo yenyika zvakarambwa neveruzhinji.